Kunxuswe abaseVuwani ukuba baye kovota – LIVE Express
uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, usenxuse umphakathi wase-Vuwani ukuba usebenzise ilungelo lawo lokuvota ngokuthi uye kovota ngoLwesithathu, mhlaka-3 August 2016.
iNingizimu Afrika izobe inokhetho lohulumeni basekhaya ngoLwesithathu nalapho kuzokhethwa khona abazohola amawadi kanye nomasipala abahlukahlukene ezweni.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-April 2016 umphakathi wase-Vuwani, owawudinwe uveva, wangenela imibhikisho, udinwa yisinqumo esathathwa yibhodi elikama imingcele njengoba lathatha isinqumo sokufaka i-Vuwani ngaphansi kwamasipala omusha, i-Mutale, e-Vhembe District.
Lokhu kwaholela ekutheni kume nse ukusebenza kule ndawo kanti zibalelwa emashumini amabili nesikhombisa (27) izikole ezashiswa kule mibhikisho.
Ngesikhathi semibhikisho kwaba nemibiko ethi amakhosi ayisithupha e-Vhembe awahambisani nalokhu kukanywa kwemingcele kabusha njengoba izindawo zawo zithinteka.
NgoLwesibili, uMengameli uZuma ube nengxoxo neNkosi u-Toni Mphephu Ramabulana, nalapho beye bavumelana ngokuthi kube nokuthula kanye nozinzo e-Vuwani.
uZuma uthi benguhulumeni banethemba lokuthi kuzoba nokhetho olunokuthula lohulumeni basekhaya, ngisho nase-Vuwani, e-Vhembe district.
BUKA: Uyabuya namuhla kwi-soapie yakuleli obesehambe iminyaka emibili